Horaa loo yidhi Dawarsato Dariiqa ayay ku colloobaan. kooxdii Asmara |
Horaa loo yidhi Dawarsato Dariiqa ayay ku colloobaan. kooxdii Asmara
Jarmalka (NogobNews) 17/10/2011 Maalin walba waxaad maqli wax kaa yaabiya maantana maxay keeneen kooxdii Asmara laga xukumay waxaynu ka wada dharagsannahay
oo marag madoonto ah in shacabka somalida ethiopia ay nabad u baahnaayeen si ay nolol iyo horumar u sameeyaan qayrkoodna wax
waxaa kale oo aan shaki ku jirin in shacabkaasi in tiisii badnayd ay nabad qaateen jabhadihii dagaalamayayna ay heshiis la galeen dawladda
Ethiopia heshiiskaasina uu miro dhalay dadkuna ay daaqayaan mirahaas.hadaba waxaa jirta koox iyagu aan doonayn in dadka iyo dalkuba dego
kooxdaasi waxaa looga taliyaa taliska Dektaitarka ee Asmara maamulkaas oo aan xumaan mooyee wax kale aan aqoonin.
hadaba waxay marwalba ku adeegtaan damiir laawayaal aan dadkooda u naxaynin kuwaas waxaa kamid ah kooxda loo yaqaan
Asmara Greup. hadaba maxaa cusub oo ay maantana keeneen kooxdaasi.
sida aan lawada soconno waxaa dhawaan socdaal kuyimid wadamada Norway Iyo Denmark Raisulwazaaraha Ethiopia halkaas oo uu
shirar kaga qaybgalaayay. waxaa iyaguna meelwalba qaylo u dirsaday kooxo isku sheegay inay mucaarad ku yihiin dawladda ethiopia
kooxahani waxay ka koobnaayeen qawmiyado kala duwan oo mid waliba ujeedo gooni ah wadata calan ugaar ahna wadata
waxaa wax lala yaabo noqotay kooxahani ismaba ayna waydiinin ujeedadooda aan ku banaan baxno ayay heshiis ku ahaayeen hal maalin markay ka hadhay maalintii ballanta ayay yiraahdeen aan isu nimaadno inteena mucaaradka ah oo aan ka wadahadalno waxa aynu ku dhawaaqidoonno-
-barrito kooxda asmara ayaa ku jirta dadkaa ballamaya koox amxaaro ah iyo in isku sheegay Orommo ayaa kulmay koox walbaay sheega
halkudhiggiina ama waxa boodhadhka idiin kuqoran natusa ayay is yidhaahdeen nin ka socday kooxda Asmara ayaa istaagay oo ku dhawaaqay
Ethiopia hadhacdo isagoo ku celcelinaya kooxihii kale ee amxaarada iyo Oromada ahaa ayaa xanaaqay oo ninkii ku yiri saas ha dhihin ma rabno
inay Ethiopia burburto ama kala go,do annagu hadafkayagu waa Ethiopia andhinet waa halqura wax goosasho layiraahdo ma aqbalaynno intaasi markii ay dhacday xaaladdu faraha ayay ka baxday gacmo isku taagtaag ayaa billwaday iyaga oo aan gaadhin maalintii ballanta ee lagu banaanbixi lahaa madaxdii dawladda ayay iyagu kooxihii mucaaradka ahaa is af dhaafeen iyagoo ogaaday inaysan halmeel ah wax u wadin.
nin aan doonayn inay ethiopia kala googo,do iyo nin doonaya in uu ka goosto ethiopida kale ismaba raaci karaan iyagii dhexdoodii aayaa kala
qabtaay ka dhacday. xaaladdu markii ay faro ka baxday ayay kooxdii Asmara ka socotay su,aalo iswaydiiyeen maxaa innagu kallifay inaynu
lashirno ama la banaanbaxno kooxo aan jiritaankeenaba raalli ka ahayn?waxay isku dayeen inay jawaab helaan nasiib darro kooxdani waxay ahaayeen dhallinyaro aan aqoon ulahayn dhulkii ay u dhasheen iyo waxa ka socda tageerayaasha ina cumar cismaan ayaa marin habaabiyay.
sidaas kuma qancin ee wiilashii waxay raadiyeen nimankii soo diray ee khaladka ku soo shubay su,aashii ayay waydiiyeen kuwii sheeganayay
mas,uuliyiinta sababta ku khasabtay inay amxaaro iyo orromo xukun raadis ah oo aan marnaba ogolayn madaxbanaanida Ogadenia!
talo ayaa ku cadaatay ninkii soo abaabulay wiilasha isaga oo aad mooddo tuug laqabtay talo maleh ayuu ku jawaabay wiillalyahaw waad ogtihiin
meelwalba way innaga soo xirantay dadkii badnaa ee ina taageerijiray nabad ayay qaateen oo waa kuwa imminka soo dhawaynaya Mr Zinaawi
sidaa daraadeed ayaa nagu kalliftay in aan la shirkawno ama la banaanbaxno kooxahaan kale oo aan ognahay inasan wax naf ah noo haynin.
ujeedaduna waxaa weeye inaan sawirro iska qaadno internetkana la soo galiyo oo ay taageerayaashanadu na arkaan annogoo calanka ururka dhex wadna banaanbaxa sidaas ayaan qaaraan ku heli karnaa maalmo dadkana aan been ugu sheegi karnaa.
waxaa kale oo uu intaas ku daray ninkaasi miyaad illawdeen wiilalyahaw bayaankii uu dhawaan soo diray Jananku ee ku saabsanaa in labadiyo
shirarka iyo bananbaxyada yurub iyo ameerica si aan u khaladno taageerayaasheenna.intaas kadib ayaa waxaa jawaab bixiyay wiilashii la soo khalday mid kamid ah. waxuuna yiri wallee idin ogaaday ujeedadiinuba wa inaan dad khaladaan si aad lacag u heshaan waxba isma dhaantaan
idinka iyo kooxdaa amxaarada ah ee aan ku heshiin waynay banaanbax barito loo diyaargaroobayo. hadda wixii ka danbeeyana nabad iyo horumarka dalkayga iyo dadkayga ayaan ka qayb qaadan.
waxaa wax lala yaabo ah in kooxda nabad-diidku maalin walba beentoodii la salgaarayo da,yartii qurbaha joogtay ee ay khaldeen ayaa ogaatay
ujeedaduba inay tahay lacag uruursi.